Wholesale Fruit drink homwe Manufacturer uye mutengesi | Yingzhicai
homwe yechikafu chemwana
akanaka vana yogati homwe
Chinhu Chibereko chinonwa homwe
Kushandisa Inokodzera muto wemichero, mukaka, chinwiwa, yogati, jelly, janpan, tofu, mvura, mukaka wesoya-bhinzi, ice-cream kamu, shuga, ect
Rakaumbwa: zvitarisiko zvose zvinogona customized vatengi
Kudhinda mifananidzo yakapihwa nevatengi kana yakagadzirirwa nevakagadziri vedu
Kudhinda kweGravure, kusvika pamazana gumi
Laminate Solventless laminate
Mharidzo Yemahara sampuro inowanikwa, mitoro inobhadharwa nevatengi, yakapihwa ne3-7days
Chiteshi chekutakura Qingdao, China
Kubhadhara 50% dhipoziti neTT, 50% chiyero neTT pamberi pekutengesa
Yakaumbwa chinwiwa bhegi ine spout, iyo inogona kuve yakagadzirirwa, ndeimwe yeanogadzira mapakeji mhinduro uye anoshandiswa zvakanyanya muiyo chinwiwa indasitiri. Yakaumbwa mabhegi echinwiwa ne spout inoratidzira yakanaka pasherefu mashandiro eiyo brand inofadza, ine chimiro chakakora mabhegi echinwiwa ne spout anogona kuve anokwezva kune vatengi.
Masaga akaumbwa anonyanya kuchinjika maererano neese chimiro uye saizi, anogona kuenderana chero chishuwo, chero chinangwa uye kutaridzika kweakasiyana mapakeji ekunyorera uye iwo ari nyore uye anoshandiswa-mushandisi kune chinwiwa indasitiri. Uyezve, mabhegi echinwiwa akaumbwa nespout anobatsira zvakanyanya mukuderedza mutengo wekufambisa nekuda kwechimiro chavo.
Yakaumbwa mabhegi echinwiwa ne spout, ine maficha ehuremu hushoma, vhoriyamu hombe asi nzvimbo ichichengetedza uchienzanisa nezvimwe midziyo yakadai semabhodhoro egirazi kana magaba ealuminium, nezvimwewo, zvinogona kuve nyore kutakura uku uchichengetedza yakawanda yemari yekufambisa. .
Mhando dzakasiyana dzezviputi dzinogona kuiswa kumabhegi akaumbwa, uye ivo vachigadzira zvigadzirwa zvechinwiwa zviri nyore kunwa, zviri nyore kudurura, zviri nyore kutakura nekubata.
Yakaumbwa mabhegi echinwiwa ne spout zvakachena uye zvinogadziriswazve kurongedza, izvo zvinova nechokwadi chehunhu hwakanaka hwechinwiwa kana mvura.
Kana zvasvika pakunwa chinwiwa, mabhodhoro epurasitiki, magaba esimbi pamwe chingave chinhu chekutanga chinopinda mupfungwa dzedu. Asi mazuva ano, zvinwiwa zvinowedzera uye zvine zvirimwa zvine mvura, kunyanya munyika dzeEurope. Uye unogona kushamisika chikonzero nei?
Kutanga, huremu hwehomwe yemvura hwakareruka. Muchokwadi, iine kugona kumwe chete, inoshanduka kurongedza chete zvinorema 1/7 kusvika 1/10 yeimwe mhando yekupakata. Izvi zvinoreva kuti, kushandisa homwe kwaizoshandisa zvishoma zvigadzirwa mbishi uye kunonyanya kugarisana nharaunda.
Zvakare, nechikonzero chekuti homwe yakapfava uye inochinjika, kana ichifambisa yakaenzana chigadzirwa, kurongedza nehombodo kunochengetedza imwe nzvimbo uye kunowedzera kudhura.
Zvakare, tichifananidza nerumwe rudzi rwekupakata, homwe yemvura inogona kuve yakachena uye iri nyore nekuti inogadziriswazve nemidziyo yakadai semapipi uye zipi.
Chekupedzisira, homwe yemvura ine zvakanakira senge yakakwira simba uye chipingamupinyi kuita, mutengo unoshanda uye zvichingodaro.
Maererano neongororo, vanopfuura makumi mashanu kubva muzana (50%) evaridzi vemakambani vakasangana nekuwedzera kwekutengesa pavanoshandisa homwe inoshanduka pakurongedza mvura, uye kushandisa homwe dzemvura dzinovabatsira kudzikisa mutengo wavo wekugadzira. Chii chimwezve, tichienzanisa nemamwe makombodhi emidziyo akadai semakani, mabhodhoro egirazi, nezvimwe, kusvika 70% yevatengi vangasarudza homwe yemvura.
Sezviri pachena, hapana mubvunzo kuti homwe yemvura iri kuwedzera kuwedzera kufarirwa uye ichave sarudzo yehungwaru kushandisa homwe yemvura.
Pashure: homwe yezvipfuyo
Zvadaro: homwe inodzivirira
Yevana Chikafu homwe
Chibereko Kunwa homwe
Simuka Homwe Spout